ขายที่ดินหัวหิน ที่ดินเปล่าชายทะเลหัวหิน เนื้อที่6ไร่เศษ หน้าชายทะเลกว้าง 75 เมตร ใกล้สนาม | DDHomeLand
โดย พชร ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ3เม.ย. 2555.
ขายที่ดินหัวหิน ที่ดินเปล่าติดชายทะเลหัวหิน โฉนดที่ดินเนื้อที่6ไร่2งาน อำเภอหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ด้านหน้าติดชายทะเลกว้าง 75 เมตร อยู่ใกล้สนามบินหัวหิน ทางเข้าโรงแรมโบ๊ตเฮ้าส์ การคมนาคมสะดวก ทำเลเหมาะทำโรงแรมและรีสอร์ท
พชร Tel: 088-500-8507
Beach Front Land for sale, Land on the beach in Hua Hin. Land area of ​​6 Rai2Ngan, Front beach Wide about 75 meters located near The Hua Hin Airport. The Boat House entrance road, The land is Convenient transportation. Location suitable for hotels and resorts.
Sale only 60,000,000 Baht
For more infomation please contact Khun Pachara Tel: 088-500-8507
For English please contact Khun Pakorn Tel: 089-535-4324
ติดต่อ: พชร อีเมล์:
ต้องการ: ขาย ราคา: 60,000,000
โทรศัพย์: 0885008507,0885008507 จังหวัด: ประจวบคีรีขันธ์
คำค้น: ဖင် လိုး လီး စုပ် | ဖင်​လိုး | ဖင် လိုး | လီး စုပ် |
အပြာစာအုပ်​ရုပ်​ပြ အောbook ထိုင်းအ​ပြာကား ထိုင်းအ​ပြာကား Nandarhling အပြာစာအုပ်​ရုပ်​ပြ সতমা চোদার গল্প মামি কে চদা အပျိုစင်​​အောကား সতমা চোদার গল্প အပျိုစင်​​အောကား ဒေါက်တာချက်ကြီး အောကာ ဒေါက်တာချက်ကြီး အောကာ သူနာပြုအိုး သူနာပြုအိုး ကာမအလှူ ခွေး ကာမအလှူ ခွေး မြန်မာမလေးများ ရှယ် မြန်မာမလေးများ ရှယ် ဒေါက်တာချက်ကြီး.com ဒေါက်တာချက်ကြီး.com လိုးပုံများ လိင် သတင်းစုံ အကိတ်​ကြီ လိုးပုံများ လိင် သတင်းစုံ အကိတ်​ကြီ ทาวน์โฮมมือสอง 101/1 ราคา ဇွန်​သင်​ဇာ​အော်​စာအုပ်​များ ทาวน์โฮมมือสอง 101/1 ราคา ဇွန်​သင်​ဇာ​အော်​စာအုပ်​များ ဒေါက်တာချက်ကြီး.com ဒေါက်တာချက်ကြီး.com ဒေါက်တာချက်ကြီး.com ဒေါက်တာချက်ကြီး.com ဒေါက်တာချက်ကြီး.com ဒေါက်တာမလေး အောစာအုပ်များ ဒေါက်တာချက်ကြီး.com ဒေါက်တာချက်ကြီး.com ဒေါက်တာချက်ကြီး.com